Ravalomanana Marc : Kandidan’ny vondrona iraisam-pirenena ? -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana Marc : Kandidan’ny vondrona iraisam-pirenena ?
Ravalomanana Marc : Kandidan’ny vondrona iraisam-pirenena ?
12/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nivoaka tokoa ny nafenina ho an-dRavalomanana izao fa ny vondrona iraisam-pirenena mihitsy no mikendry azy ho Filoham-pirenena, anton’ny fiarovana azy tsy voakasiky ny lalàna velona eto Madagasikara. Ny diany any ivelany, ny fitarainana isaka ny mihetsika ataony amin’ ny sehatra iraisam-pirenena dia misy takalony avokoa, ary antony mahatonga azy miebohebo hoe mbola tsy naharay fampahafantarana mikasika ny didy izay efa nivoaka ary manameloka azy. Porofo iray ahafahana milaza ary manamarina tokoa fa an’ny vondrona iraisam-pirenena i Ravalomanana dia ny nanaovana azy ho voalohany tamin’ ny fanontaniana hoe iza no mpitantanana sy filoha mendrika ny taona 2017. Nefa taiza moa i Ravalomanana ny taona 2017 tsy ny fanakorontanana tetsy Mahamasina ny 15 ny volana jona, saika hiditra amboletra tetsy Mahamasina ve, rehefa nosakanana ny fihetsiketsehana satria efa mazava ny antony fa hitondra « gros bras » hanakorontana tamin’ io fotoana io. Ankoatra izay dia teo ny fampiasana ny volan’ny kaominina amin’ ny fandehanana mankany ivelany miaraka amin’ i Lalao Ravalomanana. Ankoatra izay dia fantatra ihany kao izao fa hisy ny fandaminan-dresaka izay miainga any frantsay satria dia omaly tamin’ ny telo ora hariva no niainga i Ravalomanana izay ny antondiany dia ny hoe fifampiarahabana noho ny taona vaovao ny TIM frantsa. Marihina anefa fa efa any an-toerana ihany koa raha ny fantatra ny masoivoho frantsay izay monina sy miasa eto an-toerana.
Manoloana izany anefa dia mieboebo tokoa i Ravalomanana Marc satria dia ny ngezalahy maneran-tany no miaro azy, ary hametraka sy mikononkonona azy ho filoha sy voafidy amin’ny fifidianana manaraka eo. Tanjon’ireo firenena goavana mantsy ny haka ireo harembe, ka ny olona izay efa mifampiraharaha amin’izy ireo ihany no hatokisany. Ny filazana matetika fa manaiky antsika ny mpampindram-bola, ary nihaona tamin’ ireo tompon’andraikitra maro ireo tokoa ity filoha teo aloha ity, izay nanomana fatratra ny hahazoany toerana. Noho izany dia efa mila mailo isika vahoaka malagasy satria dia ho lalaovin’ny vahiny izany sy hataony saribakoly, ny olona izay kinendrin’izy ireo hapetraka. Izany rahateo dia tsy hametrahana ity filoha teo aloha ity, satria tsiahivina ny fivarotany ny tany amina hekitara maro tamin’ ny orinasa Daewoo, izay nampiongana azy ihany koa teo amin’ny fitondrana noho ny tsy fankasitrahan’ ny Malagasy io fivarotana tanindrazana nataon’i Ravalomanana io. Hiarahan’ny rehetra mahalala hatrany moa ny zava-misy tamin’ ny firenena rehetra izay nobaikoan’ny vondrona iraisam-pirenena fa zary nahantra sy lanin’ izy ireo ny harenany, noho izany dia anjaran’ny tsirairay ny mandray andraikitra. Tahaka izao tokoa mantsy ny nambarany omaly nandritra ny fifampiarabahana izay nataon’izy ireo tetsy Faravohitra omaly, “tsy matahotra izay fampitahorana isika, ary mahatoky tanteraka ny vondrona iraisam-pirenena sy ny vahoaka mpanara- dia ahy’’ hoy ity filoha teo aloha ity ihany.
Mitohy ny fihantsiana ataon-dRavalomanana
Manoloana ireo rehetra ireo dia tena mampiseho fihetsika tsy matahotra izay fanjakana misy intsony i Ravalomanana ankehitriny, sahiny mihitsy aza ny manabarabara izany satria efa mafy ny lamosiny araka ny fitenenana. Tahaka izao ny nolazaina manamarina ireo voalaza rehetra ireo “mandeha amin’ny lalan’ ny demokrasia isika, noho izany aza matahotra amin’ izay mety hiseho sy hitranga amin’izay fisamborana any. Fa ho hitantsika avokoa ny atao raha toa ka mitranga izany. Tiako hatrany ny mampahafantatra anareo fa manaraka akaiky izao zava-misy eto amin’ ny firenentsika izao ny vondrona iraisam-pirenena , izany dia manambara fa tsy irery isika. Na izany aza dia tsy hanaiky izay fampitahorana any isika, na izany hoe didim-pitsarana izany, na ihany koa fisamborana araka ny efa nambarako tamin’ny alarobia teo”. Araka ireo dia efa tena manana antoka amin’ny any ivelany i Ravalomanana, ary zimbazimbaina hatrany ny malagasy mpiray tanindrazana aminy.
Depiote miisa 73 : Noroahin’ny mpiasan’ny fanalamanga
Zatra ny lalan-dririnina loatra amin’ny fanakorontanana ny asan’olona ireto depiote milaza fa hanova zavatra eto amin’ny firenena. Diso lalana anefa izy ireo raha nandeha tany amin’ny orinasa Fanalamaga Moramanga ny alakamisy teo, nikasa ny hamoaka ...Tohiny
« Insécurité publique et disfonctionnements de nos institutions »